क’सैलाई माया गर्नु हुन्छ ? एकपटक अ’वस्य पढ्नुहोला – Jagaran Nepal
क’सैलाई माया गर्नु हुन्छ ? एकपटक अ’वस्य पढ्नुहोला
मैले उसलाई आरआर क्या’म्पसको गेटमै उन्नती बुक हाउस अगाडि पहिलोपटक भेटेको थिएँ। एक्कासी ठोक्किँदा ‘साले’ भन्दै उसले मलाई एक थप्पड लगाएकी थिई। एक अन्जान छोरीमान्छेबाट बिना गल्ती थ’प्पड खाँदा म लाज र रिस दुवैले रातोपिरो भएपनि केही नभएझैँ ‘सरी’ भनेर क्याम्पस गेटभित्र छिरेको थिएँ।
आज फर्केर हेर्दा त्यस दिन सरी भनेकोमा नमज्जा लाग्छ। सायद बिना गल्ती मागिएका माफीहरुमा मानिस सधैं पछुतो मान्छ। तर आज पनि त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ उसँग। हुन त आजकल ऊ मेरो साथी हो। संसार अनौठो छ, कुनै दिनमा दुश्मनजस्तो भेषमा भेटिएकाहरु अर्को दिन साथीको रुपमा कायापलट हुन्छन्। मेरो हकमा पनि त्यही भयो। थप्पड खाएकै दिन ऊ मेरो साथी बन्न पुगी।
त्यो दिन ०७३ सालको कुनै एक बिहान थियो। म पत्रकारितामा मास्टर्स गर्छु भनेर पूर्वी नेपालबाट काठमाडौँ छिरेको थिएँ। मलाई लाग्थ्यो म केही नभएपनि नेपालको नाम चलेको पत्रिकाको पत्रकार अवश्य बन्नेछु। त्यो सायद पहिलो सेमेस्टरको पहिलो क्लास थियो, मलाई गेटमै ठूलो झड्का मिलिसकेको थियो। मास्टर्स पढ्दा स्कुलमा झैँ हाजिर गर्ने चलन रहेछ।